Munaasabadii aas aaska Ciidanka xoogga dalka ee 12-ka April (Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Munaasabadii aas aaska Ciidanka xoogga dalka ee 12-ka April (Daawo Sawirro)
Munaasabad lagu xusayay 56-guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ciidanka xoogga dalka ee 12-ka April ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, iyadoo Ciidamada xoogga dalka ay ku soo bandhigeen dhoolatus iyo gaada ka-ciyaar.
Ciidamada xoogga dalka ayaa soo bandhigay cududooda milateri, gaadiid iyo qalab, waxaana si aad ah indhaha u soo jiitay, sida weyn ee ay ciidamada u diyaarsanayeen, xilli ay jirto daruufo heysta Ciidamada.
Munaasabadii maanta ka dhacday Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka, Wasiirka Gaashaandhiga, Taliyaha Ciidamada xoogga dalka, saraakiil iyo marti sharaf kale.
Sidoo kale waxaa munaasabada markii u horeysay si wada jir ah uga qeyb galay Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada oo Muqdisho ku sugnaa, sida Madaxweynaha Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay Munaasabada, waxaana uu xusay in Soomaaliya ay ku jirto xaalad dib u dhis ah lagu sameynayo ciidamada iyo xaalad dagaal lagu jiro cadaw.
“Ciidankeena waxaa uu ku tallaabsadey guulo waaweyn, iyagoo duruufo adag ku shaqeynaya. Waxaan awoodnay inaan wiiqno awoodda cadowga argagixisada, taasina waxay muujineysaa niyadda, geesinimada iyo waddaninimada ciidanka. Waa hubaal in waddamo badan oo inaga xaalad wanaagsan aysan weli guulo la taaban karo ka gaarin la dagaalanka argagixisada, marka la barbardhigo ciidankeena’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalka argagixisada uu yahay mid caalami ah, sababtaas darteedna uu caalamka ugu soo gurmadey Soomaaliya, miraha laga dhaxlayna ay tahay dowladnimada soo kobceysa ee haatan dalka ka jirta.
“Argagixisadu sidaad la socotaan dhowaan carruur yar- yar ayay geeyeen Puntland iyo Galmudug. Taasi waxay muujineysaa fuleynimadooda, oo waxay doonayeen inay iyagu gadaal maraan, carruurtaa yar-yarna ay iska hormariyaan. Dowladda si dhow ayay ula socotaa xaaladda carrurtaasi la soo duufsadey’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqey waalidiinta dhashay carruurtaasi la soo duufsadey inay isa soo shaac bixiyaan, ayna carruurtooda u muujiyaan jaceylka, naxariista iyo daryeelka waalidnimo ee ay xaqa u leeyihiin.
Waxaa uu ugu baaqey beesha caalamka inay Dowladda Federaalka iyo maamullada gacan ka siiyaan dhaqan celinta carruurtaasi.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in si habsami leh u socdaan howlaha isku dhafka Ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka, isla markaana dhowaan ay bilaaban doonto howl gelinta Ciidamada.
Ugu dambeyn waxaa uu Madaxweynaha ugu baaqay shacabka inay taageero buuxda siiyaan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isagoo kula dardaarmay inay dhegaha ka fureystaan wararka ay faafinayaan kuwa cadowga ah ee doonaya inay ummadda kala dhantaalaan.
Wasiiro gaaray Jowhar iyo wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta oo furmaya (Sawirro)
War murtiyeedka laga soo saaray shirkii Madasha wadatashiga qaran